Nagu saabsan - Filtration Sax
Filtration Precision wuxuu soo saaraa oo siiyaa shaandhooyin boorso tayo sare leh warshadaha. Waxaan helnay xarun wax -soo -saarkeenna ah sidaa darteedna si dhakhso leh ayaan u gaarsiinnaa, qiimaha ugu fiican oo tayo sare leh.
Waxaan leenahay ikhtiyaar ballaaran oo dhexdhexaad ah shaandheyn laga bilaabo 0.2 micron illaa 1,200 micron, oo ka kooban walxo kala duwan si loo hubiyo iswaafajinta kiimikada. Shaandhooyinka boorsooyinkan ayaa laga heli karaa agabyada: Polypropylene (Irbad Dareentay), Polyester, nylon (NMO), Nomex, PTFE, PP dhalaalay warbaahinta shaandhaynta microfiber -ka sifeynta sare -u -qaadista sare ama awooda qaadista saliidda.
Precision Filtration waa soosaarid xirfadeed, la -talin iyo shirkad ganacsi oo ku dhexjirta shaandhaynta dareeraha waxayna bixisaa xalal sifeyn oo ku habboon baahida macmiilka.
Waxaan bixinnaa badeecooyin shaandhayn oo tayo sare leh waxaanan dhisnay saldhig macmiil oo weyn sannadihii la soo dhaafay oo xiriir la leh qiimeeya isku halaynteena, adeeg wanaagsan iyo qiimaha tartanka.
Badeecadayada waxaa loo dhoofiyay Kanada, Brazil, Jarmalka, Talyaaniga, Koonfur Afrika, Australia, Kuuriyada Koonfureed, Indonesia, Filibiin iyo dalal kale oo ku yaal gobolka Aasiya Pacific. Waxaan leenahay koox dad ah oo yaqaana codsiyada warshadaha oo fahma aasaaska ka dambeeya waxa sameeya sifeyn wanaagsan. Waxaan si joogto ah u hagaajinnaa alaabtayada iyada oo loo marayo habka R&D.
Sax Filtration, lammaanaha shaandhaynta dareeraha. Kooxdayada ayaa la heli karaa 24/7.